ओलीको रोजाई भन्दै ओलीलाई नै बिदाई गर्ने कसरतमा भारत ! || विचार
ओलीको रोजाई भन्दै ओलीलाई नै बिदाई गर्ने...
ओलीको रोजाई भन्दै ओलीलाई नै बिदाई गर्ने कसरतमा भारत !
access_time 12 May 2021
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता सुब्रमन्यम स्वामीले भारतको रोजाई केपी ओली भएको भनेर अभिब्यक्ति सार्बजनिक गरेका छन् , त्यो पनि कोठामा हैन सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ! नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा रहेको वर्तमान समय छिमेकी देश , त्यसमा पनि भारतका सत्तासिन नेपालप्रति असहिष्णु रहँदै आएका नेताहरुले नेपालका नेताहरुबीच चलखेल गर्न खोज्नुलाई स्वाभाबिक नै मान्नु पर्छ ।
तर केही दिन पहिले प्रचण्डले ओलीको बिकल्प आवश्यक हुनुको कारणमा भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहिएकाले भनेर आफूलाई निर्लज्ज रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । भारतीय नेता स्वामी र नेपालका नेता प्रचण्डको भनाईलाई हामी आफैले बिश्लेषण गरेर भित्री षडयन्त्रको चिरफार गर्न जरुरी छ ।
भाजपासँग निकट रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) केपी ओलीको विकल्प दिने विषयमा दुई धारमा विभाजित छ । जसपाले एउटै निर्णय लिने हो भने नेपालको राजनीतिमा बिकसित अन्यौलता समाप्त हुने स्पष्ट छ । तर भारतकै कारण जसपाले एउटै निर्णय लिन नसकिरहेको बुझ्न दिल्ली पुग्नु पर्दैन ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नयाँ सरकार गठनको विपक्षमा र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार निर्धारित समयसिमा बिहीबार साँझसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। ठाकुरसहितका १६ सांसदले नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नउभिने जनाएसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीकै उपेन्द्र यादव पक्षसहितको समर्थनमा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना कमजोर बन्न पुगेको छ।
भाजपा नेता स्वामीले प्रचण्डलाई चीन निकट भनेर चित्रण गरेका छन् । प्रचण्डको रोजाईमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा परेका छन् । देउवा अमेरिकाको रोजाईमा छन् भन्ने कुरा एमसीसी प्रकरणले स्पष्ट गरेकै छ । नेपालमा एमसीसी भारतको पनि रोजाईमा छ भन्ने कुरा पनि छर्लंग नै छ । तर एमसीसी चीनको रोजाईमा पक्कै छैन ।
कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने भनिरहेकै छ। पार्टी पदाधिकारी बैठकले चैत २१ गतेको केन्द्रीय समिति निर्णयअनुसार ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिन संसदमा रहेका अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको हो । ओली बिरोधी कित्तामा उभिएका एमाले नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरु पनि देउवाकै पक्षमा रहेका देखिन्छन् ।
त्यसैले भारतको रोजाई नै अमेरिकाको रोजाई हो भन्ने कुरा नेपालको राजनीति र एमसीसीका बारेमा सामान्य चासो राख्नेले बुझेको कुरा हो । भारतीय नेता स्वामीको ओली रोजाई भ्रम सृजना गर्ने जाली कुरा हो ।
जसपा नयाँ सरकार गठनका लागि एकमत नहुँदा विकल्प दिन कठिन भैरहेको स्पष्ट छ। महन्थहरुलाई भारत निकट देखाएर बाबुरामहरुलाई चीन निकट भन्न खोजेको होला त भारतले ? बाबुराम र प्रचण्डको रोजाईमा एमसीसीका कट्टर लम्पसारबादी शेरबहादुर देउवा किन परे ?
बुढिगण्डकीमा भएको आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका भन्दै देउवा र प्रचण्डहरुको उछित्तो काढ्ने बाबुराम देउवालाई नै प्रधानमंत्री बनाउन किन लागिपरेका छन् ? किनकी भारत र अमेरिकाको रोजाई नै बाबुरामको प्राथमिकतामा पर्नु उन्को पनि बाध्यता बनेको छ । अमेरिकी प्रोफेसर डा. म्यारीले खुलासा गरेकी छिन् - एमसीसीको मस्यौदा डा. बाबुराम भट्टराईले नै गरेका हुन् ! बाबुरामले मस्यौदा गरेको , प्रचण्ड र देउवाले सम्झौता गरेको एमसीसी संसदबाट पारित गर्न/गराउन ओलीले सकेनन् , त्यसैले नै त्यही काम सम्पन्न गर्न र गराउनकै लागि कम्फर्टेबल सरकार नेपालमा आवश्यक भएको छ , कसरत पनि त्यसैका लागि भैरहेको हो भन्ने कुरा सबै देशभक्तहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
तर भारत र अमेरिकाको रोजाईको समीकरण भने नेपालमा त्यति सजिलो देखिएको छैन । भारतकै निकट जस्ता देखिएका जसपाका महन्थ ठाकुरहरु र भारतको रोजाईमा परेका भनिएका एमालेका केपी ओलीहरु नै भारतले बिदाई गर्ने कसरतमा परेका पात्र जस्ता देखिन पुगेका छन् । एमसीसी प्रकरणसँग जोडेर हेर्दा देखिने परिणाम यही नै हो, गहिरो बिश्लेषण आवश्यक छ ।
एमालेका ओली बिरोधीपक्षलाई साथ लिएर सरकार गठनका विषयमा कांग्रेसले छलफल अघि बढाएको छ। एमाले नेता माधव नेपालसहितका असन्तुष्टपक्षले पनि ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सहयोग गर्ने आश्वासन देउवालाई पहिले नै दिएका छन् । यसरी पनि बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जाने तयारी भएको बुझिन्छ ।
एमालेको झलनाथ-माधवपक्षलाई देशभक्त ठान्नेहरुले एमसीसीका कट्टर पक्षधर देउवालाई काँधमा बोकेर किन कलंकको टिका लगाउन तत्परता देखाएका छन् ? समीक्षा गर्न जरुरी छ, आगे एमालेजन सबैलाई चेतना भया !